Yedu Services 1. Pindura mibvunzo yako online maawa makumi maviri nemana panguva ipfupi inogoneka 2. Vashandi vane ruzivo kuti vapindure mibvunzo yako yese Dhizaini Kugadzira 1. Isu tinokuzivisa iwe nezve chaiwo masendimita uye mavara aunoda. 2. Tinogona kuburitsa polycarbonate mabhodhi, uye isu tinoda kukupa iwe mamwe mazano eruzivo rwako. A: Kana zviri zvemahara sampuli, iwe unongofanirwa kubhadhara kune kwavo kuendesa. Mubvunzo: Ndeapi mazwi ekubhadhara aunogona kugamuchira? A: Tinogona kugamuchira waya kuchinjirwa, lett ...
Yakanaka Hunhu Kupisa Kuchengetedza Warehouse Corrugated Plastiki PVC Sheet
Zvigadzirwa Zvinoratidzira-Yakareba Ruvara (angangoita makore gumi) Chigadzirwa chinoratidzira Ultra mukurumari mune zvakasikwa environment.Even pasi pemamiriro akaomarara ekuratidzwa kune UV, kupisa kwakanyanya uye kutonhora kutonhora, ichiri inoramba yakatsiga ruvara. Excllent Anti-corrosion performance Synthetic Resin Tile inogona kuramba longterm acid, alkali nemunyu ngura, nezvimwewo Kuedzwa kwakaratidza kuti kwaisazove nemakemikari maitiro mushure mekunyura munyu uye alikali uye akasiyana acid pasi pe60% .Iyo yakanaka yekushandisa mukati. ..
Gel rakafukidzwa FRP jira rudzi rutsva rwehunhu hwehunhu hwakanaka, hunogadzirwa nehuswa hunopora jasi jasi, synthetic resin uye fiberglass. Uye inoshandiswa zvakanyanya mumhando yepamusoro mota, firiji uye yekuchenesa matori rori, kurapwa, hutsanana hwekudya uye mamwe mapurojekiti. Tine mutengo wakanakisa pakati pevagadziri vemhando imwechete uye nemhando yepamusoro yemitengo. Uye isu tinovimbisa mushure-kutengesa basa kuzadzikiswa kunopera mushure mekunge wagutsikana. Simba ngura kuramba iwe ...
Zvimiro 1) Iyo fiberglass yemukati inosvika 27% -30%. 2) Kunetsa kwemamiriro ekunze uye kugona kuzvichenesa 3) Yakanaka yero kusagadzikana 4) yakasimba, inokonzeresa kusagadzikana uye yakadzika kukotama chiyero 5) kumira kwakanyanya tembiricha ye -38 degrees +110 degrees kwenguva yakareba 6) Kukwegura kusagadzikana: F4 yakatarwa firimu yakawedzerwa pa iyo yepamusoro uye inotsungirira jasi jasi kare kare. Washington City Offices grp frp nemakadhibhokisi papepa. Zvishandiso: Girazi faibha yakasimbiswa ipurasitiki, inoenderera ichigadzira muchina Chikumbiro Kudzivirira mvura kwe FRP matenga iwe ...
FRP Bonai Corrugated Fiberglass Sheet Fekitori GRP Unoda
Chigadzirwa Chigadzirwa Fiberglass yekudenga jira (fiberglass zvinhu zvepurasitiki tile kana FRP skylight yakakomberedzwa padenga pani) chinhu chinoshamisa chinoumbwa nezvinhu zvinosanganisira fiberglass yekusimbisa mune isina kunyorwa polyester resin matrix uye U / V yakadzikamisa yekunze yekudzivirira kupfeka muvara resarudzo yako ine yakasarudzika simba kuhuremu reshiyo. Nekuda kwezvinhu izvi zvakasarudzika zvakasiyana nePV kana huni, inowana mashandisiro ayo zvakanyanya munzvimbo dzese dzehupenyu: muchadenga, njanji, kemikari ...
Middle slot mitsara U mhando yemadhiraini chiteshi Ine yekudonha plug, kubuda pamwe chete kunogadzira yakakwana drainage system. Iyo migero migero ine yakatarwa yakawanda, inogona kuita maererano nezvaunoda. Inoshandiswa zvakanyanya pane gound drainage system yekuvaka dziviriro yenyika, kuvaka chivakwa, zvekutengeserana, maindasitiri. Semuyenzaniso: airport, chiteshi, paki, nhandare, akawanda marudzi emigwagwa, mativi abudise, mumugwagwa abudise uye zvichingodaro. Zvinyorwa zvedu rekuvharisa dhayamita ndeve grp frp Solicitud 1. Decoración ...